गण्डकी क्षेत्रमा इनोभेसन बारे वैज्ञानिक नारायण घिमिरे सँगको अन्तरवार्ता | Canadian Reporters
पोखरा संवाददाता, गण्डकी।
फुड साइन्सको ‘सिलिकन भ्याली’ मानिने क्यानडाको टोरन्टो, अन्तरियोलाई एक दशकयता कर्मथलो बनाइरहेका छन्, वरिष्ठ खाद्य तथा औषधि वैज्ञानिक नारायण घिमिरे । वैज्ञानिक घिमिरेको जन्म बन्दीपुर –८ याम्पाफाँटमा सन् १९७० मा भएको हो । दशरथ घिरिमे र मनिकर्णा (सुशीला) का चारमध्ये कनिष्ठ सुपुत्रका रुपमा। याम्पाफाँटमा अझै पनि खेतीपाती छ उहाँको । बुबालाई छोराले पढे पुग्थ्यो, के पढ्यो भन्ने चाहिँ मतलब नगर्ने । पढ्यो भने अरु काम गर्नुनपर्ने, पढेन भने घाँस काट्ने, गोबर फाल्नेसम्मका सारा काम भ्याउनुपर्ने । पढेर बसको देखेपछि बुबाले मिठाइ, चकलेट र विस्कुट ल्याइदिनुहुन्थ्यो । त्यसैको लोभमा उहाँ हरदम किताब समातेर बस्नुहुन्थ्यो । उहाँले पाठ्यपुस्तक भन्दा बढी उपन्यास पढ्नुभयो त्यतिबेला।
पछि आकर्षक जिम्मेवारी र तलबको मोहमा परेर निजी कम्पनीमा इनोभेसन बैज्ञानिकका रुपमा काम सुरु गर्नु भयो। काम थियो नयाँ प्रविधि र प्रडक्टको विकास गर्ने। संसार भर रहेका कम्पनीहरु सॅग प्राविधिक ज्ञान, सीप र प्रविधि विकास बारे छलफल गर्ने। उनीहरू सँगै मिलेर नयाँ इनोभेटिब खाद्य, हर्बल तथा औषधि प्रडक्ट बनाउने। अहिलेको कम्पनीको १० मुलुकमा अफिस छ। १५० देशमा फुट प्रिन्ट पुगेको छ।
एक दशकयता फुड इनोभेसनको ‘सिलिकन भ्याली’ मानिने क्यानडालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाइरहेका छन घिमिरे। बस्तु र सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा हाल सम्म संसारमा उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा उच्च प्रोफेसनल सर्टिफिकेट ‘लिन–सिक्स–सिग्मा मास्टर ब्ल्याक बेल्ट’ बाट विभूषित छन्।
तपाईं आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ?
म आफूलाई इनोभेसनको विद्यार्थी मात्र मान्छु । कृषिको रैथाने उत्पादनको गुण पहिचान, गुणको मानव कल्याणका लागि सदुपयोग हुन सक्ने मूल्य पहिचान, तिनको प्रशोधन र दिगो व्यावसायिकीकरणको जिज्ञासु पनि हुँ । कुनै प्राविधिक विषयवस्तुको अध्ययन र कार्यान्वयनमा लगभग २० हजार घण्टा खर्चने व्यक्तिलाई विज्ञ मानिएको छ । मैले पनि टोरन्टोमा बसेर कृषिजन्य एरोमेटिक (सुगन्धित) र मेडिसिनल (औषधीय) उत्पादनको भ्यालु–एड पहिचान र व्यावसायिकीकरणमा २० हजार घण्टाभन्दा बढी समय बिताइसकेको छु ।
तपाईंको उपाधिमा ‘लिन–सिक्स–सिग्मा मास्टर ब्ल्याक बेल्ट’ लेखिएको रहेछ । यसको अर्थ के हो?
यसले क्रस फङ्सनल टिमको सहभागितामा को–क्रिएसन मोडलबाट तत्कालीन अवस्थामा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा सस्तो तर सबैभन्दा उच्च गुणस्तरमा अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने ग्यारेन्टी गर्छ। सामान्य भाषामा भन्दा भने कुनै पनि प्रोसेसको नन–भ्यालुएडेड हटाउने प्रविधि लिन हो भने डिफेक्टिभ (कमसल) उत्पादन वा सेवा पैदा हुनै नसकोस् भनी गुणस्तरलाई डिजाइनबाट नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सिक्स–सिग्मा। हालसम्म संसारमा उपलब्ध लिन–सिक्स–सिग्माको सबैभन्दा उच्च प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन चाहिँ ‘मास्टर ब्ल्याकबेल्ट’ हो। त्यो मैले मार्च २०१० मै प्राप्त गरेको हुँ ।
भर्खर–भर्खर कृषि उद्यमशीलताबाट स्वावलम्बी हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेका बेला मैले सुरु गरेको काम थियो त्यो। अहिले म क्यानडामा जस्तो प्रकृतिको काम गर्छु, त्यो उद्योग त्यस्तै प्रकृतिको थियो तर मसँग भएको हालको जस्तो बडी अफ नलेज त्यतिखेर कहाँ पाउनु ? यो त कामको अनुभव, अध्ययन र तालिमले दिने रहेछ । १८ महिनामै २० वटा नयाँ प्रडकट र चारवटा नयाँ प्रविधि विकास भएको थियो । जम्मा चार लाख रुपियाँबाट सुरु गरेको व्यवसाय २० लाख रुपियाँ कारोबार गरी अर्को ३४ लाखको अर्डर हातमा थियो।
यसैबीच, मेरो एउटा गल्ती के भयो भने मैले प्रचारप्रसारका लागि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै कुरा बाहिर राखिदिएँ । कुलचन्द्र न्यौपाने, सूर्यचन्द्र बस्नेत, प्रदीप काफ्ले जस्ता काविल पत्रकारहरुले मेरो खबर कभर गर्नुभयो । राष्ट्रिय रुपमा राम्रो मान्यता मिल्यो ।
बाटो हिँड्ने जो कोही मेरोमा छिर्थे र तारिफ गर्थे । म गमक्क परेँ तर मेरो उद्योग आन्तरिक दबाबमा प¥यो । तत्कालीन समस्याको चुरो मैले आजसम्म पनि परिवारलाई सुनाएको छैन । अहिले लाग्छ, मेरो बुबालाई यसको अन्दाज थियो।
क्यानडामा रहेर इनोभेसनका क्षेत्रका तपाईंका प्रमुख उपलब्धि के–के छन् ? तिनको महत्व के कति छ?
गण्डकी क्षेत्रमा हर्बल र आयुर्वेदको इनोभेसनमा के गर्न सकिन्छ?
तथ्याङ्क अनुसार जम्मा एक्काइस हजार सात सय तेत्तिस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको गण्डकी प्रदेशमा ३२.६% जङ्गल छ। कुल क्षेत्रफलको २६.८% हिमाली, ६७.२% पहाडी र ६% तराई छ । नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ६०.५% र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ३९.४% छ। ९१.५८% मा पिउने पानी सुविधा र ८५% बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ५०.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ। प्रदेशको ७२.४% मानिसको पेसा कृषि नै छ। यो तथ्य लाई घोरिएर हेर्दा मैले त यो प्रदेश सँग स्वरोजगार प्रकृतिको उधम्सिलता विकास गरी यसका पोखरा जस्ता सिटीहरू लाई सिलिकन भेली जस्तो नेपालकै नलेज बेस इनोभेटिब सेन्टरमा विकास गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेको देख्दिन।
जंगल भनिएको ३२.६% प्रतिशत र अन्य गरी ७८ प्रतिशत भूभाग जस्ता छन्, त्यस्तै अवस्थामा सजिलै उम्रने र हुर्कने आयुर्वेदिक, मेडिसिनल, सेनिटरी क्लिनर, एरोमेटिक फुड, फुड सप्लिमेन्ट र अन्य एस्सेसरिज बोयोप्रडक्टको सम्भावना बोकेका वनस्पति र जीवाणुहरुको भ्यालु पहिचान, प्रशोधन र व्यावसायिकीकरण मार्फत धनी प्रदेश बनाउन सक्ने अवसर रहेको स्वर्ण धर्ती हो गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशलाई मैले नेपालको मेडिसिनल र एरोमेटिकको गुरु क्षेत्रको रूपमा देखिरहेको छु।
नेपालका प्रख्यात २३ तातोपानी कुण्डमध्ये म्याग्दीमा मात्रै १४ वटा (तापक्रम ५०–५८ डिग्री सेल्सियस) कुण्ड बनाउन सकिने तातोपानीका स्रोत छन् । तीमध्ये ५ वटा बेनी नगरपालिका भित्रको म्याग्दी खोला किनारमा छन् । ९ वटा मुडीको बगर, दर्बङको भाले बास्ने पोखरी, भुरुङ तातोपानी, हिस्तान र घासाको कालीगण्डकी खोलाको तीरमा रहेका छन्। म्याग्दीमा वार्षिक २० हजारभन्दा बढी तातोपानी कुण्डयात्री पुग्ने सामान्य आँकडा हेर्दा काठमाडौंलाई मन्दिरै–मन्दिरको सहर भनेजस्तो म्याग्दी लाई तातोपानी कुण्डै–कुण्डको टुरिजम क्षेत्रका रुपमा संसारभर प्रचार गर्न सकिन्छ।
ग्लोबल वेलनेस इन्स्टिच्युटको सन् २०१८ मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सन् २०१७ मा संसारका १ सय २७ देशमा रहेका अनुमानित ३४ हजार ५७ तातोपानी कुण्ड व्यवसायले १.८ मिलियन रोजगार दिँदै तातोपानी कुण्ड स्नानमा जाने तातोपानी कुण्डयात्रीबाट मात्र ५६.२ बिलियन डलर आय गरेका थिए । त्यो सम्पूर्ण वेलनेस टुरिजमको आयको ८.८ प्रतिशत हो । वार्षिक आय वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको तातोपानी कुण्डयात्रीले सन् २०२२ मा पुग्दा ५६.२ बिलियन डलरको आय दिने अनुमान छ। गण्डकीले टुरिजम अन्तर्गत ‘तातोपानी कुण्डयात्री’ वाट समेत निकै ठुलो फाइदा उठाउन सक्छ।
सफा र नरम अनुहारको छालामा लयालो सफा माटो दल्दा छालाको समस्या हट्छ । छालाका छिद्रबाट फोहर सोसी फाल्ने, प्वाल खोल्ने हुँदा यसले छालामा डन्डिफोर कम गर्ने, छाला चाउरिन नदिने, चिल्लो र चम्किलो बनाउने गर्छ । सफा र कुनै पनि अन्य कुरा नहालिएका प्राकृतिक माटो थेरापीले समेत छालाको प्वालमा जमेको ओएल र एसिडलाई घुलाइदिई छालाको भित्री भाग र रौंको जरासम्म रक्तसञ्चार गराई छालामा पिड्का, सब्क्युटानियस ब्लड फलो (रौंको जराको रक्तवहाव) का कारण हुने रातो वा नीलो कालो धब्बा हटाउन सघाउँछ।
गण्डकी मेरो जन्म थलो हो। म मेरो जीवनको अन्तिम श्वास फेर्न पनि यही पुण्य थलोमा आइपुगौँ भन्ने मेरो चाहना छ। यहा उत्पादन हुने कतिपय जंगली जटिबुटी र पर्ति जग्गामा समेत हुने जटिबुटी र हर्बल सामान्य साफ सुग्गर गर्ने काम, एक्सट्रेक बनाउने, हर्बल चिया बनाउने, चुर्ण हरु बनाउने, एक जैविक ऒखति बनाउने, जैविक मल, जैविक बिषाधि, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरु बनाउने काम हरुमा मात्र ८-१० लाखमा पनि राम्रो मुनाफ दिने गरि अस्तित्वोमा आउन सक्छ।
बिधमान बन नीतिले सबै हर्बल उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलाई शत्रुको व्यवहार गर्ने गर्छ। बन नीति साना उधम शिलातामुखी मात्रै गरिदिँदा पनि यो क्षेत्रमै कायापलट निम्तने मलेसिया – इन्डोनेसियाको अनुभबले बताउछ। ओखती, हर्बल ओखती, हिलिङ्ग खाना, भेगन खाना, हर्बल कस्मेटिक, धार्मिक उत्पादन, आयुर्वेदिक र युनानी उधम्शिलतामा जानको लागि वास्तवमा संसारमै कहीँ पनि पाउरोटी बनाउने उद्योगमा भन्दा धेरै लगानी हुँदैन। हामी यसलाई ठुलो हाउगुजी सम्झी रहेका छौ।
नेपालमा जटिबुटीको प्रसोधन र बिक्रि तथा निर्यात उधमशिलताको बिकासको लागि कृषि र हर्बल क्षेत्रको इनोभेटिभ बडि अफ नलेज मार्फत ज्ञान, शिप र प्रविधिको हस्तान्तरणको तत्काल खाचो छ। त्यसको सुरुवातको लागि सरकारले मात्र ५-१० मिलियन अमेरिकी डलर जति सक्षम निजी क्षेत्र पहिलाएर अनुदान सहयोग दिने सर्तमा तत्काल काम सुरुगर्न लगाउन पर्ने अवस्था रहेको छ। संवृद्धिका खातिर पनि निजी क्षेत्र लाइ अनुदान दिन नसकिने अनि सरकारी क्षेत्रमा भए रहेको बजेट भुईँ न भाडाको बन्ने हबिगत स्थानीय सरकारले चिर्न सक्नु पर्छ।
ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणको लागि जटिबुटी ऊधमिहरूलाई विज्ञमा परिवर्तन गर्न स्थानीय स्तरमै पाइने जडीबुटीको स्थानीय उत्पादन मुखी उद्योग स्थापना गर्न सघाउने उधम्शिलता प्रशिक्षण दिने खुबी भएका नलेज इन्कुबेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्न जरुरि छ। विद्यमान शोषणकारी जडीबुटी सङ्कलन र आपूर्ति उद्यमको अभ्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न किसानहरूलाई सहकारीमा सङ्गठित गर्दै सामूहिक मूल्य किटानी, भण्डारण र आपूर्तिमा आफै लाग्न प्रेरित गर्ने, स्थानीय आयात प्रतिस्थापन हुने गरी प्रशोधन गर्न जरुरी ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणमा अनुत्तीर्ण भएका पुराना तालिम केन्द्र हरूलाई फेरी त्यही कामको जिम्मा दिएर नयाँ नतिजा कुर्नु भन्दा आमूल परिवर्तन गर्ने अभिनव संस्कृति (इनोभेटिव कल्चर) बोकेको व्यवहारिक इनोभेसन केन्द्र स्थापना गराउने निकायको जरुरत देखिन्छ।